Search နေခြည်ဦး hd - GenFK.com
'' ရန်သူ '' ရုပ်ရှင်ကားကြီး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်... နေမင်း၊ဝတ်မှုန်ရွှေရည်၊နေခြည်ဦး
သီခ်င္းစာသားႏွင့္တီတာ Music အမ်ိဳးမ်ိဳး
23 Dec 2021 · 1K views
နေတိုး နဲ့ အကြည့်ချင်း ဆုံတိုင်း ရင်ခုန်နေရတဲ့ နေခြည်ဦး
“ကိုနေတိုး နဲ့ ဇာတ်ကားရိုက်ရင်း အကြည့်ချင်း ဆုံတိုင်း ရင်ခုန်ရပါတယ်။ အစ်ကို က အရမ်းချောတော့ ဇာတ်လမ်းထဲမှာ တကယ်ကို ကြိုက်ခဲ့ရတယ်” လို့ နေတိုး ကို ရင်ခုန်နေတဲ့ အကြောင်း ပြောလာတဲ့ နေခြည်ဦး ။ Myanmar Celebrity TV Update: Nay Chi Oo says she is excited to see Nay Toe eyes in eyes. #MyanmarActress #NayChiOo #NayToe
10 Oct 2019 · 5.6M views
##တာဇံကိုဒီမြို့ထဲခေါ်လာရင်မစားတတ်၊မသောက်တတ်၊ ကားတွေပေါ်တက်ပေါက်ကရတွေဖြစ်နေတာ။ အဲဒီဟာကြောင့်ကိုယ်မကျွမ်းကျင်တဲ့ အကြောင်းဝင်မပြောကြဖို့ပြောချင်လို့ တာဇံတွေလို့ပြောတာပါ ဆိုပြီး နေခြည်ဦး ရဲ့ ပုံလေးတွေ ပြင်ပေးလိုက်လို့ .. ဝေဖန်မှုတွေအကြောင်းကို ပြောပြလိုက်တဲ့ မေဦး။
26 Aug 2020 · 1.5M views
နေခြည်ဦး နှင့် Project K တို့ရဲ့ “COKE" Event
Beauty Blogger နေခြည်ဦး နှင့် Project K တို့ရဲ့ “COKE ကို သူနဲ့ မျှဝေလိုက်ပါ။” #ShareACokeMM Coca-Cola @ the Junction City Shopping Center, Yangon on July 9, 2017
98K views · Was live
ပဲရစ်မှာ ရိုက်ခဲ့တဲ့ အတွင်းခံဝတ်စုံနဲ့ ဓာတ်ပုံအကြောင်း ပြောပြတဲ့ နေခြည်ဦး
ပဲရစ်မှာ ရိုက်ခဲ့တဲ့ အတွင်းခံဝတ်စုံနဲ့ ဓာတ်ပုံအကြောင်း ပြောပြတဲ့ နေခြည်ဦး (ရုပ်/သံ) ဧရာဝတီ ၊ အောက်တိုဘာ ၃ ၊ ၂၀၁၉ ။ "တချို့တွေက ပြောတယ်။ အတွင်းပစ္စည်းကို ဒါမျိုး ဝတ်ပြစရာ မလိုဘူးပေါ့နော်။ Sponsor ပိုစ့်လည်း ဖြစ်နေတော့ ဒါလေးဝတ်ပြလိုက်တဲ့ သဘောပါပဲ။ ကြောက်တာတွေ၊ ရှက်တာတွေတော့ မရှိဘူး။ အရင်က မဝတ်ဘူးဆိုတာ ဝလို့ မဝတ်တာ။ လူတွေက ရှက်လို့မဝတ်ဘူး ထင်နေတယ်။ အခုထက်ပိုပြီး ခန္ဓာကိုယ် မိုက်လာရင် ဒီ့ထက် မိုက်တာတွေ ထပ်ပြီး ဝတ်ဦးမှာ"လို့ Beauty Blogger နေခြည်ဦးက ပြောပါတယ်။ ရိုက်ကူး - ဝေဝေနှင်း တည်းဖြတ် - သက်ပိုင်စိုး
3 Oct 2019 · 336K views
ချစ်သူရဲ့ တောင်းပန်မှုကို လက်မခံဘူး ဆိုတဲ့ နေခြည်ဦး
"လူတိုင်းက အမှားမကင်းဘူး ဆိုတော့ အမှားကို (၃) ခါအထိတော့ လက်ခံနိုင်ပါတယ်။ ထပ်ခါထပ်ခါ လုပ်လာရင်တော့ လက်မခံသင့်ဘူး၊ လက်ခံတဲ့သူက အရူးပဲ" လို့ ပြောလာတဲ့ သရုပ်ဆောင် နေခြည်ဦး ရဲ့ လက်ရှိ အချစ်ရေးက?? Myanmar Celebrity TV Relationship: Actress & Beauty Blogger Nay Chi Oo comments on her ended relationship. #MyanmarBeautyBlogger #MyanmarCelebrity #NayChiOo
31 Aug 2019 · 4.8M views